३३ किलो सुनकाण्डलाई ‘शून्य किलो सुनकाण्ड’ मा ढिसमिस, ठूला माछा समातिने सम्भावना घट्यो — Harpraharnews.com
३३ किलो सुनकाण्डलाई ‘शून्य किलो सुनकाण्ड’ मा ढिसमिस, ठूला माछा समातिने सम्भावना घट्यो
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार June 17, 2018 हरप्रहर न्युज
अहिलेको चर्चित प्रकरण हो-साढे ३३ किलो सुनकाण्ड । तर, यसलाई सुन तस्करहरुले ‘शून्य किलो सुनकाण्ड’ मा ढिसमिस गरेर गृहमन्त्रालयको अप्रेसनलाई असफल बनाउने प्रयास थालेका छन् ।
पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामहादुर थापा बादलभन्दा सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुको स्वर चर्को देखिन थालेको छ ।
यो प्रकरणमा मूलतः दुईवटा अपराध सतहमा आएका छन् र छानविन गर्नुपर्ने विषय पनि यिनै दुईवटा हुन् एउटा(सुन तस्करी एवं संगठित अपराध । अनि अर्को चाहिँ सनम शाक्यको हत्या भएकाले ज्यान सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान ।
-खोइ त साढे ३३ किलो सुन ?
खत्रीले आफू विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत रहँदा गोरेले सून सम्बन्धी सूचनाहरु दिएर सहयोग गरेको भन्दै उनको वचाउ गरेका छन् । साथै, गोरे डीआइजी गोविन्द निरौलाको मान्छे भएको खत्रीले बारम्बार दोर्होयाएका छन् ।
-सुन नै छैन, कसरी म सुन तस्कर भएँ ?
अब तस्करहरुको पहिलो प्रयास ‘३३ किलो सुन प्रकरण’लाई ‘शून्य किलो सुन प्रकरण’ मा परिणत गर्ने हुनेछ । सुन नै बरामद भएको छैन, अनि कसरी र कुन सुन हामीले तस्करी र्गयौं ? यही प्रश्नलाई तस्करहरुले आफ्नो तर्काधार बनाउने छन् ।
तर, यी दुबै प्रकरणबाट गोरेलाई फुर्सद दिलाउनका लागि विद्वान अधिवक्ताहरु लागिपरेका छन् ।
प्रथमतः सुनै बरामद नभएकाले सुन तस्करी गरेको देखिएन भन्ने अनि दोस्रोचाहिँ सनमको हत्यामा गोरे संलग्न नरहेको, कुटपिटमात्रै गरेको तर अरुले नै मारेको भनेर उसलाई फुर्सद दिलाउने प्रयास वकिलहरुले थालिसकेका छन् ।
-प्रहरीको संलग्नताले उब्जाएको प्रश्न
तथापि, यो घटनामा प्रहरीको संलग्नता एउटा गम्भीर प्रश्न हो । मोरङमा भएको अपराधको घटनामा काठमाडौंबाट प्रहरी खटिनु, सनमको लास गाडीमा बोकेर काठमाडौंका ती प्रहरी अधिकारीहरु धरान र इटहरीतिर घुमघाम गर्नु, गोरेसँग केही प्रहरीको पुरानै साँठगाँठ रहनु आदि हेर्दा यो हर्कतलाई ‘अण्डर कभर अप्रेसन’ मात्रै मान्न सकिने अवस्था देखिन्न ।
अपराध महाशाखालाई प्रश्न स् गोरेलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ?
-गोरेलाई देखाएर ठूला माछा गायब
यीबाहेक सुन तस्करीमा अन्य राजनीतिक दलका नेता र ठूला व्यापारीको पनि संलग्नता रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ ।
तर, यसमा गोरेतिर देखाएर ठूला अपराधीहरुका छेउमै नपुगी अनुसन्धान सकिने सम्भावना बढ्न थालेको छ । किनभने यो मुद्दा अब गृहमन्त्रालयको भन्दा पनि मोरङ जिल्ला अदालतको हातमा छ । र, यो स्थितिमा अब साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा ठूलो माछा छुट्ने त होइन भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि भेटिन थालेका छन् ।
बरु समातिएकाहरु सहजै छुटे भने अब अचम्म नमान्दा हुन्छ । यो सुनकाण्डमा सघन अप्रेसन चलाएकोमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनमानसबाट स्याब्बासी र प्रशंसा पाइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको कदममा जनताको राम्रो साथ देखिएको छ ।
तर, यो प्रशंसा त्यसबेलासम्म कायम रहनेछ, जतिबेलासम्म दोषीहरु उम्कने छैनन् ।
मधुमेह एक जटिल रोग हो, नियन्त्रनमा राख्न यसरी खानपानमा ध्यान दिउ